China CE ISO voamarina kamio 5ton-20ton mitaingina vano vita vita any Chine HIDIN'NY orinasa sy mpanamboatra | marina
CE ISO voamarina kamio 5ton-20ton mitaingina vano vita vita vita vita sinoa any Chine HIDINA
Ny orinasanay dia mamokatra crane miisa 5 taonina ka hatramin'ny 20 taonina, ny crane camion dia manana traikefa famokarana sy famolavolana mihoatra ny 10 taona, marika chassis mahazatra ampiasaina dia Foton, FAW, Jiefang, Kaima, Shaanxi Automobile, Haowo.
Ny motera dia mandray maotera fampitomboana 4-silinder miaraka amin'ny heriny matanjaka, ny rafitra hydraulic dia mampiasa paompy indroa, ny solika sy ny herinaratra ampiasaina amin'ny rafitra roa, ny rafitra fihenan-tsakafo dia misy safidy fampangatsiahana rivotra sy rano, ny fenitra fandefasana dia mety hahatratra ny fenitry ny Vondrona eropeana, ny fipoahana ary ny vodin'ny lamosina dia mandray takelaka manganese manana tanjaka avo izay manana tanjaka mahery.
Ny fanovana ny endrika fanodinkodinana teo aloha sy ny fiasan'ny throttle tsirairay avy, ny fahatsapana ny fihazakazahana roa tonta sy ny famindrana ny famaranana ary ny fihenam-bidy, noho ny fiovan'ny hafainganam-pandeha tsy miova, dia afaka manatanteraka mora foana ny asa manainga.
2.End toerana fitaovana hook ho azy
Ny tahiry farafahakeliny amin'ny fotoam-panomanana alohan'ny sy aorian'ny fandidiana, mba hiantohana ny fiaran'ny mpanjifa amin'ny fotoana fohy indrindra ary hisorohana ny lozam-pifamoivoizana an-doha vokatry ny fikolokoloana mba hanatsarana ny fiarovana ny fiara.
3.Hoisting amin'ny fitaovana winder
Raha toa ny mpampiasa manao tsirambina na tsy mahazatra ny fiasan'ny fananganana farango, ny fiakarana amin'ny fitaovana winder dia hampiato ny fiakaran'ny fararano ara-potoana, hisorohana ny fiarovana ny ain'ny tena sy ny fananana vokatry ny fahatapahan'ny tady tariby.
4.Fitaovana fanidiana mihidy
Ny fitaovana fanidiana hidy dia afaka miantoka fa tsy mihetsiketsika ny sandry manainga noho ny herin'ny centrifugal mandritra ny fizotran'ny fiara sy ny familiana ny fiara, hialana amin'ny karazana lozam-pifamoivoizana ateraky ny fihoaram-pefy.
5.Dava fanangonana paompy
Ny rafitra hydraulic dia manamboatra paompy avo roa heny, fanamafisam-peo misy valiny maromaro mba hahatsapana ny fiombonany, hanatsara ny hafainganam-pandehan'ny winch, miaraka amin'izay koa, afaka mahatsapa ny fiasan'ny vano izy.
Izy io dia afaka misafidy torque fetra fitaovana fiarovana be loatra mba hisorohana ny mpampiasa noho ny tsy fitandremana na tsy mahazatra ny fitsipiky ny fiakaran'ny asan'ny be loatra, ka nahatonga ny lozam-pifamoivoizana sy ny lozam-pifamoivoizana.
SPECIFICATION HO AN'NY CRANE
Max capacité capacité 20.000 kg
Max Manandratra Fotoana 500kN.M
Fandehanan'ny solika Max an'ny rafitra hydraulic 126 L / min
Max pressure ny rafitra hydraulic MPA 26
Sudin'ny fihodinana Ny fihodinana rehetra
Max. Taratra miasa (m) 25m
Tongotra manohana Tongotra efatra manohana miaraka amin'ny fanaraha-maso hydraulic
SPECIFICATION HO AN'NY CHASSIS
Dimension (Lx W xH) (nidina) (mm) 14000 × 2496 × 3885
Fanomezana ny fahafaha-manao (Ton) 31 Ton
Haben'ny vatana: LxWxH) (mm) 9700 × 2500 × 800, Ambany 4 mm, lafiny 3 mm
Ny zoro / ny fiaingan'ny fiaingana (°) 16/19
Overhang (aloha / aoriana) (mm) 1500/2734
Base Base (mm) 2200 + 4600 + 1350
Hafainganana Max (km / h) 102
Curb Weight (kg) 18405
Engine (Steyr Technology, vita any Sina) MODELY D10.38, rano mangatsiaka, kapoka efatra, varingarina 6 mifanaraka amin'ny fampangatsiahana rano, turbocharge ary intercooling, tsindrona mivantana
Hery, max (kw / rpm) 380HP
Fahafahana tanker solika (L) Tavo-diloilo aluminium 400L
Transmission MODELY HW19710, haingam-pandeha 10 mandroso ary 2 mivadika
Rafitra fanidiana Vaky serivisy Reraky ny rivotra voafintina
Rafitra familiana MODELY ZF8118
Axle eo aloha HF9
Asiana aoriana HC16
kodiarana 12.00R20 (Tyre Radial)
Rafitra elektrika Bateria 2X12V / 165Ah
starterDouble 7.5Kw / 24V
Fiara karetsaka HOWO 76 Tapakam-tarehy vaovao (fandriana iray, misy fifehezana rivotra), fanaraha-maso mandroso vy rehetra, 55ºmoditrika azo atodika mankany aloha, rafitra fanamafisam-peo 2-sandry miaraka amina hafainganam-pandeha telo, fitaratry ny rivotra miaraka amina radio aorina alefa ao anaty seza mpamily. ary seza mpiara-mpamily azo ovaina azo ovaina, miaraka amina rafitra fanamainana sy rivotra, visor masoandro ivelany, flap tafo azo ovaina, miaraka amin'ny radio stereo / cassette recorder, fehikibo azo antoka ary familiana azo ahitsy, tandroka rivotra, miaraka amina 4-point support mihantona feno sy mpitroka hatairana .
Teo aloha: CE ISO Certified 5ton-30ton crane teleskopy tariby vita amin'ny tanety vita any Chine HAMIDINA
Crane mitaingina kamio
CE ISO voamarina 5ton-30ton telescopic beam tru ...
Manamboatra 5ton hatramin'ny 50ton tariby teleskopika mar ...
CE ISO voamarina 5ton hatramin'ny 50 taonina teleskopika ...